RASMI: Kooxda Inter Milan oo dhammaystiray saxiixa Arturo Vidal… + SAWIRRO – Gool FM
(Milan) 22 Sebt 2020. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ee dalka Talyaaniga ayaa dhammaystirtay saxiixa Arturo Vidal, kaasoo ay kala soo wareegeen naadiga reer Spain ee Barcelona.
Arturo Vidal ayaa qandaraas labo sanadood ah u saxiixay kooxdiisa cusub ee Inter Milan, waxaana uu qiyaar u haystaa inuu sanad kale oo saxiixaad ku darsan karo, kaddib markii uu beeca xorta ah uga yimid Barcelona.
Waxaa markii hore la sheegay in Barca ay doonaysay 1 milyan oo gini si ay u fasaxdo ciyaaryahankan khadka dhexe, laakiin taa bedelkeeda heshiiska waxaa lagu sameeyay kaliya gunnooyinka la xiriira waxqabadkiisa.
Wuxuu ka duulay habeenkii Axadda garoonka diyaaradaha ee Linate, wuxuu tijaabada caafimaadka maray subaxnimadii Isniinta, isagoo maanta heshiiska cusub ku saxiixay Inter HQ.
Xiddigan reer Chile ayaa horay ugu soo ciyaaray qaar ka mid ah kooxaha waa weyn ee qaaradda Yurub sida Juventus, Bayern Munich, Barcelona, haddana waxa uu ka mid noqday Inter Milan.